xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: January 2012
How to takeaportrait to Myanmar President in 90 seconds
90 seconds with Thein Sein from ST Pix on Vimeo.
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 8:31 AM
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုဆိုတာကို Routledge ဘောဂဗေဒ အဘိဓာန်ထဲမှာ နိုင်ငံတခုရဲ့ အခြေခံ နိုင်ငံရေးစနစ် (သို့မဟုတ်) ပေါ်လစီများကို ပြောင်းစေဖို့အတွက် အဲဒီနိုင်ငံအပေါ်မှာ အခြားနိုင်ငံတစ်ခု ကဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအများစုကဖြစ်စေ ပြုလုပ်တဲ့ ကုန်သွယ်မှုအတားအဆီးများနဲ့ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆိုထားပါတယ်။
ဒီလိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့တာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘီစီ 5th century လောက်က အေသင်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Pericles က အေသင်ရဲ့ ရန်သူဖြစ်တဲ့ စပါတာတွေဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Megra ဆိုတဲ့ မြို့ပြနိုင်ငံလေးကို ကုန်သွယ်မှုပိတ်ဆို့ဖို့ အေသင် အင်ပါယာတခုလုံးကို အမိန့်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြားက ဒီလိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုလေးတွေ ကြိုကြား ကြိုကြား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမယ့် နှစ်ဆယ်ရာစု ကနဦးပိုင်းကစပြီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးမှာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဥပမာ- ၁၉၁၄- ၁၉၁၈ ကာလက ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ၊ Co- Com လို့ခေါ်တဲ့ နေတိုးအုပ်စုနဲ့ ဂျပန်ကနေ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအပေါ် ပ်ိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကနေ ၁၉၉၀- ၂၀၀၃ ကာလမှာ အီရတ်နိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခု၊ စူးအက် အရေးမှာတုန်းကဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ သူ့ရဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံတို့ကိုပါ စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:46 AM
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:03 AM
နာမည်ကြီး ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်အား ဗုံးခွဲမည်ဟုခြိမ်းခြောက်ပြီးရွှေ ၃ ပိသာတောင်းသူအား မန္တလေးရဲ ဖမ်းမိ
မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိနာမည်ကြီး ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်အား ဗုံးဖောက်ခွဲမည်ဆိုကာ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ ရွှေသုံးပိဿာတောင်းသူတစ်ဦးအား သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးအရေးယူထားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က မြို့ပေါ်ရှိရွှေဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှ မန် နေဂျာထံသို့ ဆဲလ်လူလာဖုန်းအမှတ် ၀၉××××× ဖြင့် လူတစ်ဦးက ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဖုန်းခေါ်သူက ရွှေဆိုင် အတွင်း အဓိကနေရာသုံးနေရာ သုံးခုတွင် ဗုံးများမြှုပ်ထားပြီး ၄င်းဗုံးများကို အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထား ကြောင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမရှိစေချင်လျှင် ရွှေသုံးပိဿာ(ကာလတန်ဖိုးကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ခန့်)လာရောက်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ လာရောက်ပေးရမည့်နေရာမှာ အမရပူရမြို့နယ် စွယ်တော်ဘုရားအနီးဖြစ်ပြီး အချိန်မှာ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်လာရောက်ပေးရမည်ဟု ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်ကာ ဖုန်းချသွား၍ မန်နေဂျာမှတာဝန်ရှိအဖွဲ့အ စည်းများကို အဆင့်ဆင့်တင်ပြခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်မှ ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ဖုန်းဖြင့် ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်သူ ချိန်းဆိုးထားသော အမရပူရမြို့နယ် စွယ်တော်ဘုရားအနီးတွင် ကင်းပုန်းဝပ်နေရာယူ စောင့်ကြည့်ရာ မသင်္ကာဖွယ်ဆိုင်ကယ်နှင့် လူတစ်ဦးအားတွေ့ရှိစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိုသူက အောင်မြေသာစံမြို့ နယ်နေဦး ..(၆၈) နှစ်က ရွှေများသွားရောက်ယူရန် လွှတ်လိုက်၍လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ၍ အောင် မြေသာစံမြို့နယ် ပြည်ကြီးကျက်သရေ ရပ်ကွက်နေဦး…. အားသက်သေများရှေ့တွင် ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
" အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် အမတ်များ မြန်မာဟု ပြောင်းလဲ ပြောဆိုကြပြီ "
အမေရိကန် အထက်လွှတ် တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ယခင် သုံးနှုန်းနေကျ ဖြစ်သည့် Burma အစား Myanmar ဟုပြောင်းလဲသုံးနှုန်း ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။အမေရိကန် အထက်လွှတ် တော်အမတ်များဖြစ်ကြသော ဂျွန် မက်ကိန်း၊ ဂျိုးဆက်လိုင်ဘာမင်၊ ရှယ်လ်ဒန် ဝှိုက်ဟောက်စ်နှင့် ကယ် လီ အာယော့တေတို့သည် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက စာနယ် ဇင်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် အား လုံးက ထိုသို့ ပြောင်းလဲသုံးနှုန်းပြော ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံသို့မရောက်မီ ဖိလစ် ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့စဉ်တွင်လည်း စာနယ်ဇင်း များနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်အလားတူ ပင် ပြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် ။ ဒီအချက်ဟာ သာမန်အား ဖြင့်ဆိုပါက မပြောပလောက်ဟု ထင်ဖွယ်ရာရှိသော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်မျှ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးနှုန်းပြော ဆိုခဲ့ခြင်းကို ယခုအချိန်တွင်မှ ပြောင်း လဲသုံးနှုန်းလာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အပြောင်းအလဲများအပေါ် အသိ အမှတ်ပြုခြင်း၊ အတူတကွ လက်တွဲ ရန်အသင့်ဖြစ်နေခြင်း စသည့် နိမိတ် ပုံများဆောင်နေကြောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတို့က ကောက်ချက် ချနေကြကြောင်းကို ယနေ့ထုတ်ပေါ်ပြူလာသတင်းဂျာနယ်၏ အွန်လိုင်းသတင်းများတွင် ၀မ်းမြောက်ဘွယ် ရာတွေ့ရပါတယ် ။
ဘာလို့ဝမ်းမြောက်ရသလဲလို့မေးရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်.....
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 1:18 AM
မြန်မာ တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုအား ဂျာမန်ကလပ် နုရင်ဘတ် ဒေါ်လာ ၅သိန်း ၀န်းကျင်ဖြင့် ကမ်းလှမ်း
ဂျာမန် ဘွန်ဒက်လီဂါ ကလပ်အသင်း နုရင်ဘတ်သည် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကိုအား ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဒေါ်လာ ၅သိန်း ၀န်းကျင်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇေယျာရွှေမြေ အသင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ အဆိုအရ ဂျာမန် ကလပ် အသင်းသည် မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် ကလပ်များ အတွက် ကစားသမားများ ခေါ်ယူ ပေးခဲ့ဖူးသူ အေးဂျင့် ဒရာဂန်မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ် ကမ်းလှမ်း လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျော်ကိုကို၏ ခြေစွမ်းအား စမ်းသပ်လို နေကြောင်း သိရသည်။ ခြေစွမ်း အစမ်းသပ်ခံစဉ် ကာလအတွင်း လေယာဉ်ခ၊ နေထိုင် စားသောက်စရိတ် အစရှိသည် တို့အား ၎င်းတို့ အသင်းဘက်မှ ကျခံပေးမည် ဖြစ်ပြီး အကယ်၍သာ ခေါ်ယူဖြစ်ခဲ့မည် ဆိုပါက လစာ အနေဖြင့် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀မှ ၅၀၀၀ကြား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ဇေယျာရွှေမြေ အသင်းကိုလည်း ဒေါ်လာ ၄သိန်းမှ ၅သိန်းအထိ ပြောင်းရွှေ့ကြေး အဖြစ် ပေးချေမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုပမာဏသည် မြန်မာ့ ဘောလုံး သမိုင်းတွင် မြန်မာ ကစားသမား တစ်ဦးအတွက် အမြင့်မားဆုံး ပြောင်းရွှေ့ကြေး တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေကာ ကျော်ကိုကို အနေဖြင့် အာရှတိုက် ပြင်ပသို့ သွားရောက် ကစားသည့် ပထမဆုံး လက်ရွေးစင် ကစားသမားလည်း ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံမှ ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်သော GILAT Satcom ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုစနစ်နှင့် အခြားသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်မှု အစီအစဉ်ကို လက်ရှိ ကာလအထိ စီစဉ်နေရဆဲ ဖြစ်နေကာ ၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လုပ်ကွက်ရယူလိုနေသည်ဟု ဆိုသည်။ “ကျွန်တော်တို့က ဂြိုဟ်တုစနစ်တွေရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် ကိစ္စမျိုးစုံကို လုပ်ဆောင်ပေး ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ထားပါတယ်၊ တခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေကို လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက UMFCCI ကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်”ဟု GILAT မှ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ Mr.Itzik Baron ကပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စရေးသံရုံး၏ အကူအညီဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ “ဒီအချိန်မှာ အစ္စရေးရဲ့ GILAT က မလွတ်တမ်းဝင်လာရင်တော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားမှာပါ၊ သူတို့က မြန်မာမှာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ်၊ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိသေးဘူး” ဟု GILAT ၏ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဒေါက်တာဇော်မင်း က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဈေးကွက် အတွင်း မြန်ဆန်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်နေမှုများရှိနေပြီး ၎င်းတို့၏ www.gilat.net တွင်လည်း မြန်မာဘက်မှ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်/
သတင်း : MDSNG
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 2:51 AM
နိုင်ငံတော်သံဃာ့ မဟာနာယက အဖွဲ့နဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်နဲ့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ မဟန ဘက်ကပဲရပ်ပါတယ် ၊ ဘုရားဟောပိဋကတ်တော်တွေ အမြောက်အများ ရှိတဲ့ကြားထဲက အလယ်တန်းဖတ်စာထဲက ပင်ဝါးရုံ အကြောင်းကို ဟောတဲ့ ဘုန်းကြီးနောက်ကို မလိုက်နိုင်ပါဘူး ......
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:06 PM
"ခင်ညွန့်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင် သိန်းစိန်နဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိ "
( ဆောင်းပါးရှင် မြန်မာသ့တော်ဆင့်ရဲ့ စဉ်းစားဘွယ် အငြင်းပွားဘွယ် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ် ၊ စဉ်းစားကြဘို့ အငြင်းပွားကြဘို့နဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ဘို့ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွှန့် ရဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့တွေ ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိပ်းတာကို ခံရတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါပါတယ် ၊ အရှိန်ရနေတဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်သွားရဘူးပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ သူ့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်ပါပါတယ် ဘာလို့ခွင့်လွှတ်လဲမေးရင် ( ၁ ) က ပြန်မစချင်တော့လို့ပါ ....ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား )
ဝင်စတန် ချာချီဟာ သူရဲ့ နာမည်ကျော် အတွဲပေါင်း များစွာရှိတဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး (Second World War) လို သမိုင်းကျမ်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အရေးကြီးပုံချင်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပေမဲ့ အရွယ် အစားအစား လက်ဝါးသာသာ လောက်သာရှိတဲ့ စာအုပ်(ကျမ်း) ကလေး တစ်အုပ်ကိုလဲ ရေးခဲ့ ဘူးတယ်။ စာအုပ်နာမည်က Great Contemporaries (pub. 1947) တဲ့။
စာအုပ်ထဲမှာ တခြားခေတ်ပြိုင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အတူတူ ဟစ်တလာ၊ စတာလင်နဲ့ ထရော့စကီးတို့ အကြောင်းတွေလဲ ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ နိဒါန်းမှာတော့ ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သူက ဝေ့လည်ကြောင်ပါတ် လုပ်မထားဘဲ ပြောင်ပဲ ပြောထားပါတယ်။ အာဏာရှင် စံနစ် (ကွန်မြူနစ်ဝါဒ)နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် တိုက်ပွဲကြီး အကြောင်းပါ။ “ကြိုတင် မှာထားချင်တာ ကတော့ ကြိုတင်လက်နက် တပ်ဆင်ထားကြ” (To be forewarned is to be forearmed) လို့ အတိအလင်း ပြောထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ကျနော် ပြောချင်တာက ချာချီဟာ သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို (ဗကပလေသံနဲ့ ဆိုရရင်) ရန်/ငါစည်းခြား သတ်မှတ် ပြခဲ့ယုံသာမက သူတို့ပြုမူခဲ့ပုံတွေကို သမိုင်းအမြင်နဲ့လဲ ကြည့်မြင်ခဲ့တဲ့ အချက်ပါ။ ဥပမာ စတာလင် ကွယ်လွန် (၁၉၅၃) တော့စတာလင်ကို သူ(ချာချီ)က “ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ (ကမ္ဘာကြီး သံမဏိနဲ့ လျှပ်စစ်ခေတ်ကို ရောက်နေချိန်မှာ) သစ်သားထွန်တုံး ထွန်တံကိုပဲ သုံးနေရသေးတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့ သူသေသွားတဲ့ အချိန်မှာ သူ့တိုင်းပြည်ကို ညူကလီးယား လက်နက်ပိုင်ရှင် နိုင်ငံအဖြစ် ချန်ထားရစ်ခဲ့တယ်။” (He was born intoacountry that still used wooden ploughshares. When he died he left his countryanuclear power.) လို့ အကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ရန်သူဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေး ကိုယ်လုပ် သွားကြတာချင်းကတော့ အတူတူဘဲ ဖြစ်လို့ လူအရတော့ လေးစား ပြတာကို တွေ့ ရတယ်။
စစ်ကြီးအပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ သူပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း တွေထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူဟာ ဒီမိုကရေစီကို ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး ကာကွယ်တဲ့ ခုခံစစ်ကြီးကို ကြီးမှုးခဲ့ပေမဲ့ “စင်စစ် ဒီမိုကရေစီဟာ အပြစ် အနာအဆာ မကင်း၊ ချို့ယွင်းချက် ဗလပွနဲ့ စံနစ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့လဲ ကမ္ဘာကြီးအတွက် လက်တွေ့မှာ ပိုကောင်းတဲ့ ၀ါဒစံနစ် ဆိုတာလဲ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒါကိုဘဲ ဖက်တွယ် နေရပါတယ်” လို့ ၀န်ခံ မှတ်ချက် ပြုခဲ့ဘူးပါတယ်။
အစိုးရနှင့် KIO ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးနောက် ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်
( ဓါတ်ပုံ - ဦးကိုကို facebook မှ )
အစိုးရနှင့် KIO အဖွဲ့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ပဏာမ တွေ့ဆုံမှုကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ရက်နှင့် ၁၉ရက် နေ့များတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင်ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ကြပါသည်၊ ဆွေးနွေးမှု အပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်ပါ အချက် လေးချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် KIO ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရန် ရှေးရှု၍ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ရက်နေ့ နှင့် ၁၉ရက်နေ့တို့တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
(၂) နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် KIO တို့သည် နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းဖြင့် ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး သွားမည်။
(၃) ဆွေးနွေးကြသည့် အကြောင်းအရာများကို ပြည်သူအများ သိရှိစေရန် မှန်ကန်သော သတင်းများ ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၄) စစ်ရေး အရှိန်များကို ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရန်နှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက် သွားနိုင်ရန် အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားနိုင်သော ဒေသများရှိ နှစ်ဖက်သော တပ်များ ကိစ္စအား ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည် ။
တစ်လောက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ ခေါင်းမဖေါ်ဝံ့တဲ့ ကုလားမဝေနှင်းပွင့်သုန်ဟာ ၊ သူ့အဖေ ကိုမြအေးလွတ်လာပြီးတဲ့ နောက် ရက်ပိုင်းအကြာမှာ တစ်စခန်း ပြန်ထလာပါတယ် ။ ဒီလ ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် Guardian သတင်းစာကြီးမှာ "သူ့အဖေလွတ်တာကိုတော့ ၀မ်းသာပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်မြန်မာပြည်မှာခုထိဘာမှ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး" ဆိုပြီး "My father's release from prison is good. But there is still no reform in Burma" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စားကောင်းသောက်ကောင်းအောင် အော်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
ရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ် မြန်မာပြည်မှာ မကြုံစဖူး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ တောက်ပလုဆဲဆဲ အချိန်မှာ ကုလားမဖျက်လို့ တိုင်းပြည်အပျက်မခံနိုင်ပါဘူး ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ဆက်နေချင်သေးတယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းနေပါ ။
ကိုယ့်အမျိုးကိုယ် ကာကွယ်နေတဲ့ ကုလားမ ဝေနှင်းပွင့်သုန်
EU ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အကောင်းမြင်စပြုပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို လာမယ့်ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ရုတ်သိမ်းဘို့ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ ကုလားမရဲ့ စားခွက်မပျောက်အောင် လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလုပ်ရပ်ကို လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ် ။ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ရှိတဲ့သူတိုင်း ဒီကုလားမလုပ်ရပ်ကို ကန့်ကွက်ကြဘို့ တိုက်တွန်းရေးသားအပ်ပါတယ် ။
ကုလားမရဲ့ ဆောင်းပါးမူရင်း Link က ဒီနေရာ မှာပါ
မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် KIO တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ယနေ့ ပထမနေ့ ကျင်းပသည့် မြန်မာအစိုးရ ဘက်မှ ဦးအောင်သောင်း ခေါင်းဆောင်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျှက်ရှိပါသည် ။ ရွှေလီမြို့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယခုအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုသည် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါသည် ။အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် KIO ကတင်ပြသော စာတမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ (Stop Online Piracy Act) ကိုကန့်ကွက် ၊Wikipedia ဆိုဒ် ၂၄ နာရီပိတ်
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အငြင်းပွားဖွယ် SOPA (Stop Online Piracy Act) ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေ ပြုသင့်၊မပြုသင့် အဆိုတင်သွင်းထားသော ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် တဲ့ အနေနဲ့ ..Wikipedia ဝက်ဆိုဒ် ဟာ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ၂၄ နာရီတိတိ ဆိုက်ကို ပိတ်ထား ပြီ ဖြစ် ကြောင်း သိရှိ၇ပါတယ် ။
အမေရိကန်အစိုးရက ဒီဥပဒေ အသက်သွင်းမှုကို တရားဝင်ရပ်စဲထားတယ် ဆိုပေမယ့် Wikipedia ကတော့ ဆန့် ကျင်တဲ့ အနေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့ ဆိုဒ်ကို ၂၄နာရီ shut down လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ ဆိုဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပါတယ် ။
— at Wikipedia.
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 3:37 AM
ရွှေည၀ါဆရာတော်အားအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းသံဃာ့နာယကအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သောစာ
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 12:59 PM
အကျဉ်းကျရာကနေ လွတ်မြောက်လာတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို သတိထား ပြောဆိုဖို့ ရေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ် တစ်ယောက်က ခင်ဗျားတို့က ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို အထင်သေး လှချေလားလို့ အစချီပြီး ပယ်ပယ် နယ်နယ် ဝေဖန်တဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပို့လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေကို စိုးရိမ်နေသလဲ ဆိုတာ အသေအချာ ပြန်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ နောက်ဆုံး အကြိမ် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ၂၀၀၇ နဲ့ အခု အခြေအနေတွေ မတူတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
ပထမဆုံး ကွဲပြားမှုကတော့ နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ တုံးက စစ်အစိုးရက အုပ်ချုပ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ အငွေ့အသက် မရှိသလောက်ဘဲ။၂၀၀၄ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အကျဉ်းက ပြန်လွတ်လာတော့ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ်ပဲ အ်ိမ်ပြန် လာခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၄-၀၇ ကြား လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း အင်မတန် ရဲဝံ့သူများလောက်သာ အနားမှာ ၀န်းရံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ကိုမင်းကိုနိုင် အိမ်ပြန်ခရီးမှာ အာဏာပိုင်တွေက ကူညီခဲ့တာ၊ လူထုကြီးက ကြိုဆိုတဲ့အပေါ် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး ဘာမှ မလုပ်ခဲ့တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဒီကနေ့ နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကို သိနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယ ကွဲပြားမှုကတော့ မီဒီယာ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ တုံးက ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို ပြင်ပ မီဒီယာတွေကပဲ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့တော့ အားလုံး မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များဟာ ၁၉၈၈- ၁၉၈၉ နဲ့ ၂၀၀၄-၂၀၀၇ ခုနှစ် ကာလသာ ပြင်ပမှာ လှုပ်ရှားခွင့် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထက်စာရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမှ ပြင်ပမှာ နေရတဲ့အချိန်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ထိတွေ့မှု ပိုများခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီလို အကျဉ်းကျ ကာလနဲ့ အကြာကြီး နေခဲ့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်၊ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး အတွက် ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါးလုံး နှစ်မြှု လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အကျဉ်းကျရာကနေ ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ လူထုကြီးနဲ့ တွေ့ရ၊ မီဒီယာတွေက ၀ိုင်းဝန်း မေးမြန်းကြဆိုတဲ့ အခြေအနေနဲ့ တွေဆုံရတဲ့အခါ စိတ်အား ထက်သန်မှုတွေ အများကြီး ပေါ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ၈၈ တုံးက စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ၂၀၀၇ တုံးက ထက်သန်မှုတွေ ပြန်ဖြစ်လာမှာလည်း အသေအချာပါပဲ။ အဲဒီ Emotion ရဲ့ သယ်ဆောင်အားဟာ စကားကျွံမှုတွေ၊ အဆုံးအဖြတ် မှားမှုတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
မြောက်ဥက္ကလာပမှာ ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းကို နားထောင်လိုက်ပါ။ လူထုကို လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ သတ္တိတွေ ရှိရဲ့လား၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ဖယ်ရှားရမယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ပါနေတာကို သတိပြုနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၈၈၊ ၂၀၀၇ တုံးက Regime Change အတွက် ပြောတာ မှန်ပေမယ့် ဒီကနေ့အစိုးရဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို သွားနေပြီ၊ တစ်ချိန်က အတိုက်အခံ ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ Regime Change တို့ လမ်းပေါ် ထွက်မယ့် လူထု တော်လှန်ရေးတို့ ဆိုတာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့ထက် ရပြီး အပြောင်းအလဲကို တုန့်ဆိုင်းဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ သမ္မတအနေနဲ့ နိုင်ကျဉ်းတွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် လွှတ်ပေးဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ ဒီလူတွေ အားလုံး အပြင်ရောက်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ၈၈ ပုံစံ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုပြီး စိုးရိမ်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပေါ်ခဲ့တာ အားလုံး သိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အခုပြန် လွတ်မြောက် လာတဲ့ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေပေါ် တုန့်ပြန်မှုများဟာ သမ္မတရဲ့ အနာဂတ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်တွေ အပေါ် ရိုက်ခတ်မှုရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင် ထက်စာရင် ကိုလှမျိုးနောင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုဌေးကြွယ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များက လက်တွေ့ အခြေအနေနဲ့ ပိုပြီး နီးစပ်တယ်၊ အခြေအနေကို သတိပြုပြီး ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ပြောသွားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၈၈ မျိုးဆက်များ အတွင်းမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါက ပိုကြီးတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ လက်ရှိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေကို ထိခိုက်စေမယ့် အပြောအဆို၊ အပြုအမူများကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား at 6:10 AM